ရှစ်လေးလုံး စစ်ခွေးမုန်း 88 | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Opinions & Discussion » ရှစ်လေးလုံး စစ်ခွေးမုန်း 88
ရှစ်လေးလုံး စစ်ခွေးမုန်း 88
Posted by ဦးကြောင်ကြီး on Aug 8, 2013 in Opinions & Discussion |5comments
First eleven အင်တာနက်စာမျက်နှာမှာ အမျိုးသားလွှတ်တော်ဥက္ကဌ ဗိုလ်ချုပ်ဟောင်း ဦးခင်အောင်မြင့်ရဲ့ ရှစ်လေးလုံး ငွေရတု သဝဏ်လွှာ ဖတ်ရသဗျ.. ၁၉၈၈ ဒီမိုကရေစီ လှုပ်ရှားမှုကို၁၉၃၀ ရေနံမြေ သပိတ်ကြီးနဲ့ နှိုင်းယှဉ်ဂုဏ်ပြု အစချီထားပြီး အလယ်လောက်မှာ ဟောသည်လို ဆိုသဗျ “၁၉၆၂ နောက်ပိုင်းတွင် ၁၃၀၀ ပြည့် အရေးတော်ပုံ၏ ရည်မှန်းချက် တစ်ရပ်ဖြစ်သော ဆိုရှယ်လစ် အရေးအတွက် ဦးလှည့်ကြိုးပမ်း ခဲ့ပါသော်လည်း တစ်မျိုးသားလုံး မျှော်လင့်တောင့်တခဲ့ကြသည့် ငြိမ်းချမ်းသာယာ ၀ပြောသော ခေတ်မီနိုင်ငံတော်သစ်ကိုကား မတည်ဆောက်နိုင်ခဲ့ပါ။ ဤကာလရှည်ကြီးအတွင်း ကမ္ဘာ့နိုင်ငံရေး တူရူချက်မှာလည်း တစ်ရာ့ရှစ်ဆယ်ဒီဂရီ လှည့်ပြောင်းသွားသည်ကို သတိပြုမိပါသည်။ အထူးသဖြင့် နှစ်ဆယ်ရာစုနှောင်းပိုင်း ဆယ်စုများလောက်မှစ၍ ကမ္ဘာ့လူထု၏ တိမ်းညွတ်မှုမှာ ဒီမိုကရေစီနှင့် ဈေးကွက်စီးပွားရေးစနစ် ဖြစ်လာသည်။ မြန်မာနိုင်ငံ ရှစ်လေးလုံး ဒီမိုကရေစီ အရေးတော်ပုံကြီးမှာ ဤနောက်ခံ အခင်းအကျင်းတွင် ပေါ်ထွက်လာခြင်း ဖြစ်ပါသည်။” http://www.news-eleven.com/politics/21919-%E1%80%9B%E1%80%BD%E1%80%85%E1%80%B9%E1%80%B1%E1%80%9C%E1%80%B8%E1%80%9C%E1%80%B6%E1%80%AF%E1%80%B8-%E1%80%92%E1%80%AE%E1%80%99%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%80%80%E1%80%B1%E1%80%9B%E1%80%85%E1%80%AE-%E1%80%A1%E1%80%B1%E1%80%9B%E1%80%B8%E1%80%B1%E1%80%90%E1%80%AC%E1%80%B9%E1%80%95%E1%80%B6%E1%80%AF-%E1%80%B1%E1%80%84%E1%80%BC%E1%80%9B%E1%80%90%E1%80%AF-%E1%80%A1%E1%80%81%E1%80%99%E1%80%B9%E1%80%B8%E1%80%A1%E1%80%94%E1%80%AC%E1%80%B8%E1%80%9E%E1%80%AF%E1%80%AD%E1%82%94-%E1%80%A1%E1%80%99%E1%80%BA%E1%80%B3%E1%80%AD%E1%80%B8%E1%80%9E%E1%80%AC%E1%80%B8%E1%80%9C%E1%82%8A%E1%80%90%E1%80%B9%E1%80%B1%E1%80%90%E1%80%AC%E1%80%B9%E1%80%A5%E1%80%80%E1%81%A0%E1%82%92-%E1%80%9E%E1%81%80%E1%80%8F%E1%80%B9%E1%80%9C%E1%82%8A%E1%80%AC%E1%80%B1%E1%80%95%E1%80%B8%E1%80%95%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%82%94 စစ်တပ်အမာခံ ခေါင်းဆောင်တဦးရဲ့ ရှစ်လေးလုံ အရေးတော်ပုံအပေါ် အသိအမှတ်ပြု ဝန်ခံချက်ကို ကြိုဆိုရမှာ ဖြစ်ပေမဲ့ နောက်ဆက်တွဲစကား မဆလဆိုးမွေသည် ပြည်သူလူထုနဲ့လည်း ဆိုင်ကြောင်းကိုတော့ ပြတ်ပြတ်သားသား ပယ်ချရမှာဖြစ်တယ်။
သူပြောသလို မြန်မာ့လွတ်လပ်ရေးနဲ့အတူ တိုင်းပြည်ကို ဆိုရှယ်လစ်ဝါဒ တည်ဆောက်ဖို့ အဲဒီအချိန်က နိုင်ငံ ခေါင်းဆောင်များ စိတ်ကူးခဲ့ကြတာ ငြင်းစရာ မရှိဘူး၊ မြန်မာနိုင်ငံသာမက လွတ်လပ်ပြီးကာစ လွတ်လပ်ရေး ကြိုးပမ်းဆဲနိုင်ငံ အသီးသီးမှာ ဒီလိုပဲ ရည်မှန်းလုပ်ကြတာများတယ်။ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းလည်း ဆိုရှယ်လစ်၊ ဦးနုလည်း ဆိုရှယ်လစ်၊ တိုးတက်တဲ့အမြင်ရှိ နိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်များအားလုံး ဆိုရှယ်ခဲ့ကြတာပဲ။ ဒါပေမဲ့ သူတို့ရည်မှန်းခဲ့တာ ဖက်ဆစ်အာဏာရှင်စနစ် မဟုတ်ဘူး၊ စစ်အုပ်ချုပ်ရေးစနစ် မဟုတ်ဘူး။ ကမ္ဘာ့စစ်အေး တိုက်ပွဲကာလမှာ ကြားညှပ်ခဲ့တဲ့ နိုင်ငံအတော်များများမှာ စစ်တပ်အာဏာသိမ်းပွဲတွေ ရှိခဲ့တယ်၊ အိမ်နီးချင်း ထိုင်း၊ အင်ဒိုနီးရှား၊ ဖိလစ်ပိုင် စတာတွေ အနီးစပ်ဆုံးရှိတယ်။ ဘာတွေဘယ်လို ဖြစ်ခဲ့ဖြစ်ခဲ့ အချိန်တန်တဲ့အခါ စစ်တပ်သူ့နေရာသူ ပြန်သွားကြတာချည်းပဲ။
ရုပ်သေး တုပ်ကွေး ဖြုတ်ရေး လှုပ်ပေး (ဒေါက်တာလွဏ်းဆွေ ဘလော့ဂ်မှကူးယူသည်။)
မြန်မာပြည်မှာတော့ အဲလို မဟုတ်ပေါင်ဗျာ။ ၁၉၆၂ထဲက အာဏာယူလာတဲ့စစ်တပ် ၂၀၁၃ခုနှစ် တဝက်စွန်းပြီ နေရာယူထားတုံးပဲ။ လုပ်ရပ်မပြင်သလို အတွေးအမြင်လည်း မစွန့်ပြန်ဘူး..။ ၁၉၈၈ခုနှစ်မှာ ပြုတ်ကျသွားတဲ့ မဆလပါတီအပေါ် အခုအချိန်အထိ အကာအကွယ်ပေးတုံးပဲ။ သူတို့ကိုယ်တိုင်လည်း ဆန္ဒပြသမားထောင်ချီပြီ သတ်ဖြတ်ခဲ့ကြတာကိုး။ စကားထဲက ဇာတိပြ အခုနောက်ဆုံး ဦးခင်အောင်မြင့် စကားက သက်သေခံနေတယ်။ အချို့က ရေတဝက် ဖန်ခွက်ဥပမာနဲ့ စောဒက တက်ချင်တက်မယ်.. မင်းကလည်းကွာ လောဘကြီးရန်ကော.. ဒီလောက် ပြောတာပဲ လွန်လှပြီ…ဘာညာနဲ့။ မဆိုင်ဘူး အခုဟာက စစ်တပ်ရဲ့ mindset တွေးခေါ်ရှုမြင်ပုံကို ပြနေတာ။ ရှေ့ဆက်သွားမည့် စစ်တပ်အနေအထားကို မြင်နိုင်တယ်။ နှစ်ပေါင်းငါးဆယ် တိုင်းပြည်ကိုဖျက်ဆီး လာသူတွေ ဒါလောက်တောင် စာနာမပြနိုင်ရင် အတူလက်တွဲဖို့ ဖြစ်နိုင်ပါ့မလား။ ခံရသူတွေက သူတော်စင်တွေ မဟုတ် ဆိုတာလည်း မြင်ပေးကြအုံးလေ..။
သင့်မြတ်ရေး ကြေအေးရေး ပြောနေတဲ့ အတိုက်အခံခေါင်းဆောင်များ မသိချင်ယောင်ဆောင် မနေကြပါနဲ့..။ ပကတိအခြေအနေကို လက်ခံရမယ်ဆိုရင် ဒါဟာ လယ်ပြင်ဆင်သွားသလို ထင်ရှားနေတဲ့ သက်သေဖြစ်တယ်။ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ယုံကြည်မှု လွန်ကဲပြီး ဖြစ်လေမလား မျှော်ကိုးဇွတ်တိုးရင် ဆင်သွားလို့ လမ်းမဖြစ်ဘဲ ဆင်ကန်း တောတိုးဖြစ်၊ ဆင်ကြီး ဂဠုန်ချီခံရကိန်း ဖြစ်ဖွယ်ရှိတယ်။ ဒဏ်ရာကျက်ချင်ရင် အနာခံ ပြည်ဖောက်ထုတ်ရသလို စစ်မှန်တဲ့ ပြန်လည်သင့်မြတ်ရေး လိုချင်ရင် လှိုက်စားဆွေးမြေ့နေတဲ့ တွေးခေါ်မှုများကို သန့်စင်ရှင်းပစ်မှသာ မှန်ကန်တဲ့ အမျိုးသားရင်ကြားစေ့ရေး လမ်းကြောင်းပေါ် ရောက်ပါလိမ့်မယ်။
မှတ်ချက်။ စာရေးသူသည် ၈၈အရေးတော်ပုံကာလတွင် အသက်ငယ်သေး၍ ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျ မပါဝင်ခဲ့ရဘဲ နောက်ပိုင်း ကာလ၌ နိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားမှု ငြိမ်သက်သွား၍ အံတကြိတ်ကြိတ် ရှိနေခဲ့ကာ ၂၀၀ရခုနှစ် ရွှေဝါရောင် ဖြစ်သည့်အခါ ပြည်ပရောက်နေ၍ တောက်တခေါက်ခေါက်ဖြင် သံရုံးရှေ့ ဆန္ဒပြခဲ့သူဖြစ်သည်။
ဒီနေ့ မင်္ဂလာပါဘူးဗျာ ၈၈၈၈ အရေးတော်ပုံ ငွေရတုမို့ စိတ်ပေါက်နေတာ…
ဒီကြားထဲ မြသန်းစံရဲ့ ပါပီမနဲ့ လူဖြစ်လာတဲ့သူတွေက
ကိုယ်မမှီတဲ့သမိုင်းကို အရောင်ဆိုးချင်ကြသေးတယ်… လေပါ့
အမှားကိုတောင်းပန်၊ ထောက်လှမ်းရေး ခင်ညွန့်အပါအဝင် စစ်ခွေးတွေရဲ့လက်ချက်နဲ့
ဘဝပျက်သွားရတဲ့ နိုင်/ကျဉ်း တွေကို တစ်စုံတရာ ပြန်စောင့်ရှောက်သင့်တယ်…
လိုချင်တာရဖို့ အသက် တွေစတေးခဲ့ရတယ်။ ဘဝတွေပေးခဲ့ရတယ်။
အပေး အယူ လုပ်ချိန်တန်ပါပြီ။
ဆိတ်ဝင်မစားတဲ့ ခရစ်လေးကို ဦးကြောင်ကြီး ဝင်စားမယ်… ကျွေးမား…. လျှာဂျီးနဲ့ ရှလွတ် ဆိုပီး… ပြောရမှာ ရှက်ပါဒယ်
တယ်…. ဒီကြောင်းဂျီးးး အရိုးတွန်ခဲ့တဲ့ အရေးတော်ပုံနေ့တွေတောင်
ရှလွတ်နေဒုန်းးး။ တိုင်းရေးပြည်ရေးက အရေးကြီးရမယ်အချိန် သွေးနီးဖို့
ခရစ်လေး.. လာ.. ကိုရင်နဲ့လိုက်ခဲ့ . ဘာမှနားမလည်တာကောင်းတယ်..။ ဒုတ်ခသည်စခန်းသွားပီးး ရက်ဖြူဂျီလုပ်ရင်း